Warbixintii guddiga difaaca oo saaka loo gacan geliyey dawladda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Siyaasadda ciidammada Ruushka oo welwel abuurtay
Warbixintii guddiga difaaca oo saaka loo gacan geliyey dawladda
La cusbooneeyay fredag 31 maj 2013 kl 15.22
La daabacay fredag 31 maj 2013 kl 10.16
Waa in la dardar-geliyo wada-shaqeeynta Naato iyo waddama waqooyiga Yurub dhaca
Guddiga ka baaraan-degga difaaca ayaa maanta soo ban-dhigay war-bixintiisii la xiriirtay qiimeeynta xaaladda nabad-gelyo ee dalka, midkaasina oo dawladda gacanta loo geliyey. War-bixinta ayay ku dheehnayd in xaaladda qalabeeyn ee ciidammada Ruushku welwel ka abuurtay shakiga laga qabo ammaanka dalka Iswiidhen.
- Is-bedelka ku dhacaya habka qalabeeynta ee ciidammada Ruushka ayaa u socda xoowli baaxad leh oo aan la qiyaasi karin halka uu caga dhigan doono, sida ay gudoomiyaha guddiga sheegtay Cecilia Widegren (M), iyadoona u barbar-dhigtay war-bixintii middaan ka horeeysay ee la soo saaray muddo shan sannadood ey iminka ka soo wareegtay.
Guddiga ayay hoowshiisu tahay mid furan, isla-markaana u howl-gala si hufnaan leh, isagoona hoowlihiisa ey ka mid ahaayeen inuu kala soo xaajoodey saadaaliyaal iswiidhish iyo caalamiba ah, sida ay sheegtay Widegren.
Dhanka kale ayuu guddigu war-bixintiisa ku saadaaliyay in dalkani u baahan yahay sidii hor-u-marin loogu sameeyn lahaa habka wada-shaqeeyn ee dalkani la leeyahay ururka gaashaan-buurta Naato:
– Waa inay halkeedii ka sii socotaa wada-shaqeeynta ururka gaashaan-buurta Naato, iyada oo la tix-raacayo wada-shaqeeynta ku dhisan aasaaska laba geesoodka saaxiib-ti-nimo sida ay sheegtay Cecilia Widegren.
Sidoo kale in la ballaariyo xiriirka wada-shaqeeyn ee dalkani la leeyahay waddammada dhaca waqooyiga Yurub iyo waddammada Baaltika ee Istooniya, Litaawen iyo Letland.
Xubnaha guddiga ayaa isugu jira xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka, aqoon-yahanno arrimmahaa ku xeel-dheer oo ka howl-gala madaxtooyada, iyo hayado dawli ah. Hoowlaha uu guddigu u xil-saaran yahay ayaa ah sidii uu war-bixin joogto ah uga keeni lahaa xaaladda is-bedbedelka ammaan ee caalamka, halista iyo halka ay ka iman karto. Goolka laga leeyahayna uu yahay in aragti guud laga leeyahay xaaladda difaac iyo ammaan ee dalka.